Baphinde baphazamisa umhlangano onogada kuMasipala – LIVE Express
Bakuphindile futhi lokho onogada kuMasipala weTheku kanye nalabo abagada izikhulu zikamasipala bephazamisa umhlangano wesigungu esiphezulu njengoba besaqhubeka nokulwela ukuthi kuguqulwe izinga abakulona ngokomsebenzi.
Lokhu kulandela isigameko esifanayo esenzeka maphakathi noFebhuwari njengoba kuthiwa bavele bangena sebegulukudela kusaqhubeka umhlangano wesigungu esiphezulu nalapho bafuna ukuphoqa ukuthi izikhalo zabo zilalelwe ngokushesha.
iMeya yeTheku, u-James Nxumalo, uyigxekile indlela labo nogada abaphakamise ngayo izikhalo zabo wathi bakhombisa ukulahlekelwa indlela yokuziphatha njengoba udaba lwabo belungekho ohlwini lwezinto ebezizodingidwa kulo mhlangano.
“Ngikhathazekile kakhulu ngendlela enisingatha ngayo lolu daba. Bengizoqonda ukuba nize kuthina ukuze kube nomhlangano enizophakamisa kuwo izikhalo zenu. Siyawubonga umsebenzi eniwenzayo kodwa izenzo zenu zizokwakha ukhondolo olumbi futhi zikhombisa eminye iminyango ukuthi nayo ingaphazamisa isigungu esiphezulu ukuze iveze izikhalo zayo. Lena akusiyo indlela uMkhandlu osebenza ngayo futhi angeke sakuvumela,” kugxeka uNxumalo.
uNxumalo uphinde waxwayisa labo nogada ngokuthi isenzo sabo sizoba nemiphumela engemihle waphinde wabaluleka ngokuthi basebenzise imigudu efanele.
Onogada bathi lolu daba seludonse isikhathi eside kodwa imiphumela ayibonwa. Bakhala ngokuthi kuyimanje baku-grade 7 kanti kade babezama ukuguqulwa kodwa akwenzeki.
Esigamekweni esedlule uNxumalo wacashunwa ethi: “Siyazi ukuthi eminye imikhandlu ikhokhela onogada bezikhulu okungaphezulu kakhulu. Lokhu kuyingozi njengoba ukunakekeleka kwethu kusengcupheni”.